सेक्स क्यालेन्डर : छोरा या छोरी जन्माउने भन्ने निश्चित ! – Rastriyapatrika
सेक्स क्यालेन्डर : छोरा या छोरी जन्माउने भन्ने निश्चित !
उपेन्द्र खड्का-गर्भ राख्दा नै छोरा या छोरी निश्चित गर्न सम्भव रहेको दाबी अझै हराएको छैन । गर्भको सन्तान गर्भ राख्ने दिनमै निश्चित गर्न सघाउन चिनिया क्यालेन्डर, जापानी क्यालेन्डर लगायतका धेरै क्यालेन्डर पछ्याउनेहरुको संख्या अझै उस्तै छ । के यो सम्भव विधि हो त ?
तस्बिर कृष्पा श्रेष्ठ, मोडल : शोभा पौडेल र आशिष अर्याल, शुक्रबार-नागरिक
उनका अनुसार पिरियड सुरु भएको पाँच दिनपछि गर्भ बस्ने सम्भावना बढ्दै जान्छ । नौ दिनपछि सक्रिय हुन्छ । चिकित्सकका अनुसार पाँच दिनदेखि नौ दिनसम्म पनि गर्भ बस्ने सम्भावना हुने भएकाले गर्भ नचाहने जोडीले अस्थायी साधनको प्रयोग गर्नु उत्तम हुन्छ ।
‘महिनाबारी भएको दिनलाई पहिलो दिन मान्ने हो भने नवौँ दिन देखि १७ औँ दिनसम्म गर्भ बस्ने सम्भावना अत्यधिक हुन्छ,’ डा. बराल भन्छन्, ‘यस अवधिमा युवाजोडी (स्त्री–पुरुष) बीच यौन सम्बन्ध हुँदा गर्भ बस्छ । औसतमा महिनाबारी भएको १४ औँ दिनमा गर्भ बस्ने सम्भावना सबैभन्दा बलियो हुन्छ ।’
बरालका अनुसार पुरुषको शुक्रकिट यौन सम्पर्क भएको ३ देखि ५ दिनसम्म पनि जीवित रहन्छ । त्यसैले महिनावारी भएको नवौँ दिनमा यौन सम्पर्क गरेको छ भने पनि १४ औँ दिनमा महिलाको डिम्ब निस्कँदा गर्भ बस्ने सम्भावना हुन्छ । त्यस्तै १४ औँ दिनमा महिलाको डिम्ब निस्कँदा तीन दिनसम्म डिम्ब बाँच्ने भएकाले १७ औँ दिनमा यौन सम्पर्क भयो भने पनि गर्भ बस्न सक्छ ।
दैनिक यौन सम्बन्ध राख्दा वीर्य पातलो भएर गर्भ बस्ने सम्भावना कम हुने जानकारी दिँदै उनले नवौँ दिनदेखि १७ औँ दिनसम्म दिन बिराएर यौन सम्पर्क गरेको खण्डमा गर्भ बस्ने सम्भावना बलियो हुने बताए ।
सिभिल अस्पतालकी स्त्री तथा प्रसूति विभागकी रजिस्ट्रार डा. रीमा महर्जन औसतमा २८ दिनको महिनाबारी हुने चक्रमा सहमत छिन् ।
महर्जनका अनुसार २८ दिनको महिनाबारीको साइकल छ भने पछिल्लो महिनाबारी हुनुभन्दा १४ दिनअगाडि महिलाको अण्डा फुट्छ । महर्जनका अनुसार एक हप्ता महिनाबारी तलमाथि हुनु सामान्य हो ।
त्यसैगरी सिभिल अस्पताल स्त्री तथा प्रसूति विभागकी रजिस्ट्रार डा. ईशा श्रेष्ठ महिलाको अण्डा फुटेको समयमा यौन सम्पर्क भयो भने गर्भ रहन सक्ने बताउँछिन् ।
‘अण्डाको जीवनचक्र २४ घण्टाको हुन्छ । महिलाको अण्डा फुटेको २४ घण्टासम्म यौन सम्पर्क भयो भने गर्भ रहन सक्छ,’ श्रेष्ठले भनिन्, ‘अण्डा फुटेको २४ घण्टा सम्ममा पुरुषको शुक्रकिट महिलाको योनिबाट भित्र छि¥यो भने गर्भ रहने सम्भावना बलियो हुन्छ ।’
महिलाको अण्डा फुट्ने समय निश्चित भने हुन्न तर अण्डा फुटेको दिनबाट दुई हप्तामा महिनाबारी हुने समय निश्चित हुन्छ ।
‘३० दिनमा महिनाबारी हुने महिलाको महिनाबारी भएको १६ दिनमा अण्डा फुट्छ । २२ दिनमा महिनाबारी हुने महिलाको १२ दिनमा फुट्छ । २८ दिनमै महिनाबारी हुने महिलाको अण्डा फुट्ने समय अघिपछि पनि हुन सक्ने भएकाले बच्चा नचाहने यौन जोडीले महिनावारी भएको तीन दिनपछि अस्थायी साधनको प्रयोग गर्नु राम्रो,’ उनको सुझाव छ ।
नवौँ दिनभन्दा अगाडि र १७ औँ दिनभन्दा पछाडि गर्भ बस्ने सम्भावना कम हुने बराल बताउँछन् ।
पिरियड साइकलको गणनाबारे चिकित्सक र ज्योतिषशास्त्रीबीच समानता देखिन्छ । ज्योतिष उपाध्याय महिनाबारी भएको १८ रातपछि गर्भ रहने सम्भावना कम हुँदै जाने बताए । सामान्यतः रातका समयमा यौन सम्पर्क हुने मान्यतामा ज्योतिषहरुले रातको गणना गर्छन् ।
ज्योतिष घिमिरे र उपाध्याय १२ बजेपछिको समयमा यौन सम्पर्कपछि गर्भ बसेको खण्डमा बच्चा तेजस्वी हुने दाबी गर्छन् ।
‘दिउँसो यौन सम्पर्क गर्नु राम्रो हैन, दिउँसोको समयमा बसेको गर्भले ग्रहका कारणले जन्मिने बच्चामा समेत असर पर्छ,’ घिमिरेको सुझाव छ, ‘बिहानको सूर्य उदयको समयमा यौन सम्पर्क राख्नु हुँदैन ।’
डिम्ब निस्किएको कसरी चाल पाउने ?
चिकित्सकका अनुसार डिम्ब निस्किएको समयमा महिलाको शरीरको तापक्रम केही बढ्छ । चिकित्सक बरालका अनुसार यो बेला आधादेखि एक डिग्री फरेनहाइटसम्म तापक्रम बढ्न सक्छ । त्यसैगरी यौनीबाट बग्ने पानी अन्य समयको भन्दा बढी चिप्लो हुन्छ ।
‘योनिमार्गबाट निस्केको पानी दुई वटा औँलाको बीचमा च्यापेर फैलाउँदा अघिपछि तन्कन्छ तर बच्चा बस्ने समयमा त्यो चिप्लो पानी औँलाले च्यापेर फैलाउँदा टुक्रा परेर जान्छ,’ चिकित्सक बरालले भने, ‘तन्कियो भने अर्को हार्मोन निस्किएको छैन भनेर बुझ्नुपर्छ तर डिम्ब निस्कँदा हार्माेन परिर्वतन हुन्छ । नयाँ निस्किएको हार्मोनले ¥याल टुक्र्याउँछ र बच्चा बस्न योग्य हुन्छ ।’
महिनाले छुट्ट्याउँछ स्वभाव
ज्योतिषशास्त्रीहरु जन्मिएको महिनाको आधारमा समेत बच्चाहरुको गुण खुट्याउन सकिने दाबी गर्छन् । यसमा चिकित्सकहरु सहमत देखिएनन् । चिकित्सकको मतअनुसार कुन बाल–बालिका कस्तो हुन्छन् भन्ने उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था र हुर्काइको वातावरणमा भर पर्छ ।
शुक्रबारकर्मीले कुरा गरेका दुवै ज्योतिषअनुसार ६ महिना सूर्य उत्तरायण हुन्छ । उत्तरायण भएको बेला सूर्य पूर्ण हुन्छ । ६ महिना दक्षिणायन हुन्छ । यो समयमा सूर्य घटेको हुन्छ । पूर्ण देखिँदैन ।
माघदेखि असारसम्म सूर्य पूर्ण देखिन्छन् । असारदेखि पुससम्म सूर्य कमजोर हुन्छ । सूर्य कमजोर भएको अवस्थामा जन्मिएको बच्चा कमजोर हुने उनीहरुको मत छ ।
माघदेखि असारमा जन्मिएको बच्चा सक्षम हुन सक्छ । चैतदेखि असार महिनामा जन्मिएको बच्चा धेरै राम्रो हुने ज्योतिष घिमिरे र उपाध्यायको तर्क छ ।